- ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်အတွက် သရုပ်ဆောင်တဦး ထပ်မံရွေးချယ်မည် click
- ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ သဘာ၀၀န်းကျင် ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ချင်းမိုင် ဆွေးနွေးပွဲ click
- မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ဖမ်းဆီးရမိ click
- တိုရွန်တိုစတား သတင်းစာတိုက်ရှေ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဆန္ဒပြ click
- အာဖဂန်တိုက်ခိုက်မှု လူအများအပြား သေဆုံး click
- အီဂျစ် ရုပ်သံတင်ဆက်သူကို ရုံးတင်စစ်ဆေး click
- အမေရိကန်နဲ့ တရုတ် ပစိဖိတ်မှာ ပြိုင်စရာမလို click
- သမ္မတလောင်းကတော် Ann Romney ရဲ့ မိန့်ခွန်း click
- မိုင်းလုပ်သားတွေအမှု သူပါဝင်လို့မရကြောင်း သမ္မတ ဇူးမားပြော click
- အီဂျစ်ရုပ်သံတင်ဆက်သူကို ရုံးတင်စစ်ဆေး click
- ထိုင်းအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု နည်းပါးကြောင်း လေ့လာသူကိုယ်စားလှယ်များ ပြောဆို click
- နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၏ လှုပ်ရှားမှုများ click
- မြန်မာ့မူးယစ်ဆေးနှင့် ဘင်္ဂလီ ဘင်္ဂလာတွင် ဖမ်းဆီးမိ click
At 9/02/2012 10:49:00 PM No comments:
နှစ်ပေါင်းများစွာ လက်တွဲလာခဲ့တဲ့ ပုသိမ်မြို့က NLD ပါတီဝင်တွေကို ဒေါ်စု တကယ်ပဲ လက်တွဲဖြုတ်လိုက်ပြီလား
ပုသိမ်မြို့မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်ထဲဝင်လိုက်/လူမုန်းခံလိုက်/ဒုက္ခတွေခံလိုက်နဲ့ NLD ပါတီနဲ့အတူ / ဒေါ်စုနဲ့အတူ နှစ်ပေါင်းများ စွာ တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့ ပါတီဝင်တွေကို ဒေါ်စုတကယ်ပဲ လက်တွဲဖြုတ် လိုက်ပြီလားဗျာ.. ပါပါကြီး ဒီဓါတ်ပုံကိုကြည့်လို့ ၀မ်းနည်းပြီး မျက်ရည်တွေကျနေတယ်ဆိုတာ ယုံပေးကြပါ ဗျာ... သင်တို့တွေလဲ သေသေချာချာခံစားကြည့်ပါ...
At 9/02/2012 09:40:00 PM 1 comment:
လူရွှင်တော် ဦးဇာဂနာမှ မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ယက်သို့ တောင်းပန်စာပေးပို့ခဲ့ပါကြောင်း သတင်းရရှိ ပါတယ်။
သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီ ၊ မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက် ။
At 9/02/2012 09:31:00 PM No comments:
ရှစ်လေးလုံး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ပြန်လည်ဆုံဆည်း
ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုမိုးသီးဇွန်တို့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းမှုကို သတင်းထောက်များက မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်နေပုံ၊
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာ ကွဲကွဲသွားကြတဲ့ ရှစ်လေးလုံး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ အခု တော့ ပြန် လည် ဆုံဆည်းဖြစ်ကြပါပြီ။
At 9/02/2012 09:29:00 PM No comments:
ပြန်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး အင်အားစု ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးများ တွေ့ဆုံ
သမ္မတရုံးဝန်ကြီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိမ်း၊ ဦးအောင်မင်းနဲ့ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်သိမ်း တို့ဟာ ပြည်ပက ပြန်လာ တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေး အင်အားစု ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေလီ လမ်း၊ ဗဟန်း မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Myanmar Peace Centre မှာ ဒီကေ န့တွေ့ဆုံခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
At 9/02/2012 09:20:00 PM No comments:
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ရခိုင် အရေး နောက်ဆုံး ဆောင်ရွက်နေမူ အပေါ် ဝေဖန်ဆောင်းပါး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူ ဖြစ်စဉ် အတွင်းမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ သူတွေ အပေါ် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှ (ပြင်ပ ပယောဂတွေကြောင့်) ကျောသား ရင်သားခွဲခြားပြီး ဘက် လိုက် ဆောင်ရွက် နေတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်မူများ ထွက်ပေါ်နေ တဲ့ နေရာ မှာ အခု နောက်ဆုံး ထွက်လာတဲ့ ပြည်တွင်း အခြေစိုက် Coral Arakan News Agency မှ သတင်း ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်က စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အတွက် စာဖတ်ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
At 9/02/2012 08:53:00 PM No comments:
အလုပ်သမားတွေအပေါ် အလုပ်ရှင်တွေဖက်က ဖိနှိပ်နေတာတွေ အဆုံးသတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာ ယာမြို့နယ် အတွင်း စက်မှုဇုန် အသီးသီးမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ် (၂၀၀) လောက်ဟာ ဆိုင်းဘုတ် ပိုစတာတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး လှိုင်သာယာ ဘီအိုစီအ၀ိုင်း အနီးကနေ ရက်ကွက်တွေအတွင်း ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ပထမဆုံးအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
At 9/02/2012 08:45:00 PM No comments:
ထိုင်းအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုနဲပါးကြောင်း လေ့လာသူ ကိုယ်စားလှယ်များပြောဆို
ထိုင်းနိုင်ငံ ပါလီမန်လွတ်တော်နဲ့ ဒေသန္တရအုပ်ချူပ်ရေးဆိုင်ရာတွေကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ က ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းေ ဆာင်တွေ အပါအ၀င် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းက အဖွဲ့ဝင် ၂၂ ဦးဟာ ဒီကနေ့ညနေပိုင်းက ချင်းမိုင်မြို့ကနေရန်ကုန်မြို့ကို လေယာဉ်နဲ့ ပြန်လည် ထွက်ခွါသွားကြ ပါတယ်။
At 9/02/2012 08:42:00 PM No comments:
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် လောက ပြန်လည် ထူထောင်ရန် ခေတ်မီ စတူဒီယိုများ ဖန်တီးရန်လို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၂၀ ခုနှစ်မှ စတင် ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သည့် မြန်မာရုပ်ရှင်ကို ပြန်လည် ထူထောင်ရန် (ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရေးကွင်း) ခေတ်မီ စတူဒီယိုများ ဖန်တီးရန် လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇင်ဝိုင်းက စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ပြောကြားသည်။
At 9/02/2012 08:38:00 PM No comments:
သမ္မတရဲ့ ရခိုင်အရေး ရပ်တည်ချက် မန်းသံဃာနဲ့လူထု ထောက်ခံ ဆန္ဒဖော်ထုတ်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ရခိုင်အရေး ရပ်တည်ချက်အပေါ် ထောက်ခံတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်နဲ့အောင်မြေသာ စံမြို့နယ်တွေမှာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့ပြီး သံဃာတော် (၅) ထောင်ကျော်အပါအ၀င် ပရိသတ် အင်အား စုစုပေါင်း (၁) သောင်းကျော်လောက် ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်အားပေး ခဲ့ကြပါတယ်။
At 9/02/2012 08:34:00 PM No comments:
KIA သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့မှ ထပ်မံ အလင်းဝင်ရောက်လာသူများ
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်ခန့်တွင် စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် (၁၆)၊ စစ်ဆင်ရေးနည်းဗျူဟာ (၁)မှ နည်းဗျူဟာမှူး၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ကျေးရွာ လူကြီး များ၊ မုံးကိုး ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အလင်းဝင်ရောက်ရန် ဆက်သွယ်စည်းရုံး ဆောင်ရွက် ခဲ့ရာ မုံးကိုးတပ်စခန်းသို့ KIA တပ်ရင်း (၃၆/၃၈) မှ တပ်သား အဆင့်ရှိသူ ထန်ရိန်းမီး၊ KIA ဒေသခံ ပြည်သူ့စစ် ရီဆာတို့နှစ်ဦးသည် လက်နက်၊ ခဲယမ်းများနှင့်အတူ အလင်းဝင် ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။
At 9/02/2012 06:25:00 PM No comments:
အမေရိကန်မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ယီမင် အရှေ့တောင် ပိုင်းတွင် အယ်လ်ကိုင်ဒါ အဖွဲ့ဝင် ရှစ်ဦး သေဆုံး
အမေရိကန် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် တစ်စင်းမှ ပစ်လွှတ်လိုက်သည့် ဒုံးကျည် နှစ်စင်းသည် ယီမင်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း ဟာဒရာေ မာက်ပြည်နယ်တွင် မောင်းနှင်နေသော ယာဉ်တစ်စင်းကို ထိမှန်ခဲ့ရာ ယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါ လာသည့် အယ်လ်ကိုင်ဒါအဖွဲ့ဝင်ဟု ယူဆရသည့် စစ်သွေးကြွရှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ လုံခြုံရေး အရာရှိ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
At 9/02/2012 06:19:00 PM No comments:
ဗဟိုဘဏ် သီးခြားရပ်တည်ဖို့ ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ကို အစိုးရအဖွဲ့က အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်အရ ဝန်ထမ်းဦးရေ နှစ် ဆကျော် ပိုမိုပါဝင်တယ်လို့ ဗဟိုဘဏ်မှ သိရသည်။
At 9/02/2012 06:11:00 PM No comments:
မိုးမောက်မြို့နယ် ၊ ကျခမ်းဒတ် ကျေးရွာတစ်ဝိုက်မှာ တရားမ၀င် သစ်တွေ ခိုးယူသယ်ဆောင်နေတဲ့ ယာဉ်တွေပေါ်ကို သစ်အတင်အချပြုလုပ်တဲ့ အလုပ်သမားတွေထဲမှာ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင် အယောက် (၂၀) ခန့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
At 9/02/2012 06:09:00 PM No comments:
မြန်မာပြည်အပေါ် ယခင်က စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့မှုများ
လွှတ်တော်တွင် ရေးဆွဲနေသော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေတွင် ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကာကွယ်သည့် အပိုဒ်များ ထည့်သွင်းလာနေေ သာကြောင့် အတည်ပြုပြဌာန်းမည့် ယင်းဥပဒေသည် မြန်မာ့ စီးပွားရေးကို ချုပ်ကိုင်ထားသော ထိပ်သီးစီးပွားရေးသမားများ ကိုသာ အကျိုးဖြစ်စေပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်သူများကို ဆွဲဆောင်မှု နည်းစေမည်ဟု ဝေဖန်နေကြသည်။
At 9/02/2012 05:59:00 PM No comments:
ပြည်ပ အတိုက် အခံများ အစိုးရပေါ် ယုံကြည်မှု တိုးလာ ဟုဆို
မြန်မာ နိုင်ငံရေး အပြာင်းအလဲ များနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း စဉ်များ၊ နိုင်ငံသား အားလုံး ပါဝင်နိုင်မည့် နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ် ဖော်ဆောင် နေမှုကြောင့် ပြည်ပအတိုက်အခံများ ကြား နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင် သော အစိုးရ အဖွဲ့ ပေါ်ယုံကြည် မှု တိုးလာကြောင်း ဇွန်လ၁ ရက် နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသော ABSDF ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးမိုးသီးဇွန် က ပြောကြားသည်။
At 9/02/2012 05:56:00 PM No comments:
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် အနုပညာရှင်များတွေ့ ဆုံပွဲမှ ပြောကြားချက်
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသစ် ဦးအောင်ကြည်က ယင်း၏ဋ္ဌာနနှင့် ဆက်စပ်နေသော အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကို စည်းမျဉ်း ပြဋ္ဌာန်း၍ ချုပ်ချယ်သွားမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြား လိုက်သည်။
At 9/02/2012 03:35:00 PM 1 comment:
လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် လုပ်သားများ ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ် စက်မှုဇုန်များရှိ စက်ရုံ ၃၀ခန့်မှ အလုပ်သမား ၂၀၀ကျော် အလုပ်သမား အခွင့် အရေး အပြည့်အ၀ရရှိရေး အတွက် စက် တင်ဘာလ ၂ရက်နေ့ နံနက် ၉နာရီမှ ၁၁နာရီ အထိ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေး စီတန်း လှည့်လည် နေကြသည်ကို တွေ့ရစဉ်။
At 9/02/2012 03:25:00 PM No comments:
ရခိုင်ဒေသအရေး မန္တလေးမှာ ဆန္ဒပြ
ဒီမနက် မန္တလေးမြို့ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအများအပြား စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
At 9/02/2012 02:16:00 PM No comments:
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် အနုပညာရှင်များတွေ့ ဆုံပွဲ
ယနေ့ စက်တင်ဘာ(၂)ရက် မနက် (၁၀)နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးခန်းမ တွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် အနုပညာရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပမည်။ တွေ့ဆုံပွဲ မတိုင်မီ မနက် (၉)နာရီလောက်ကတည်းက အနုပညာရှင်များ တဖွဲဖွဲ ရောက်ရှိ လာကြောင်းသိရသည်။
At 9/02/2012 02:06:00 PM No comments:
ရန်ကုန်ပြည်သူ့အ ကျိုးဆောင် ကွန်ရက် တာဝန်ခံအား အာဏာ ပိုင်များ ထိန်းသိမ်း
လက်ပံတန်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းမှ လျော်ကြေးငွေမပေးဘဲ လယ်မြေသိမ်း ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လယ်သမား များဘက်မှ အကူအညီပေးနေသော ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင် ကွန်ရက် တာဝန်ခံ ကိုဝေဠုအား သြဂုတ် ၃၁ ရက်နေ့ည ၈ နာရီခန့်တွင် မြင်းမူမြို့၌ အာဏာပိုင်များက ထိန်းသိမ်းလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
At 9/02/2012 01:58:00 PM No comments:
မန္တလေးတွင် သမ္မတကြီးကို ထောက်ခံကြောင်း ရဟန်းရှင် ပြည်သူ ၄၀၀၀၀ ကျော် ဆန္ဒဖော်ထုတ်
မန္တလေးတွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စ၍ ရဟန်းရှင် ပြည်သူများ စုပေါင်းကာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်စိန်၏ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အပြောင်းအလဲလုပ်ဆောင်မှုများ ကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံသည့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကြီး ကို စုပေါင်းပြုလုပ်လျှက်ရှိပြီး ယခုအချိန်အထိ ရဟန်းရှင် ပြည်သူ စုစုပေါင်း ၄၀၀၀၀ ကျော် စုဝေးလှည့်လည်လျက်ရှိကြောင်း မြန်မာ့သားကောင်း သို့ သတင်းပေးပို့ထားပါသည်။
At 9/02/2012 01:39:00 PM No comments:
သမ္မတကြီးအား ထောက်ခံကြောင်း မန္တလေးမြို့တွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မတကြီးအား ထောက် ခံကြောင်းနှင့် ကွင်တာမန္တလေး၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်း ဆရာတော် ဦးဝီရသူ ဦးဆောင်သော ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စီတန်းလှည့်လည် ထုတ်ဖော် ဆန္ဒပြပွဲတစ်ရပ်ကို စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
At 9/02/2012 01:23:00 PM No comments:
သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး နှစ်ဦး နှင့် ABSDF ဗဟိုဥက္ကဌဟောင်း များ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်
သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးနှစ်ဦးနှင့် ABSDF ဗဟိုဥက္ကဌဟောင်းများ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး နှစ်ဦးနှင့် ပြည်ပမှ ပြန်လည် ရောက် ရှိ နေ သည့် မြန်မာ နိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုက ရက်တစ် တပ်ဦး ABSDF ဗဟို ဥက္ကဌ ဟောင်း များ တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးမှုများကို ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ နံနက် ၈နာရီ အချိန်က ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ဦးဝိစာရလမ်းနှင့် ရွှေလီလမ်းထောင့် ခြံအမှတ် ၁၃ တွင် ပြုလုပ် လျှက် ရှိကြောင်း Eleven Media Group အင်တာနက် သတင်းအရ သိရသည်။
At 9/02/2012 01:10:00 PM No comments:
သင်္ဘောတစ် ကာတို့ ရဲ့ ထိပ်ခေါင်-The ship of all ships
.... ဆိပ်ခံဘော ၄ ခု၊ သင်္ဘောကိုယ်ထည် ၁၈ခုတို့ အား တင်ဆောင် ကာ တရုတ်နိုင်ငံ နန်တုံဆိပ်ကမ်းမှ တင်ဆောင်ထွက်ခွာလာစဉ်... The ship of all ships: The largest cargo transport ship in the world, the Blue Marlin of Dockwise, carries four pontoons and 18 hulls on its back from Nantong Port, China
At 9/02/2012 01:07:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ်မှ ထွက်ရှိသော ယူရိုသန်းချီ တန် ကျောက်စိမ်းတုံးနှစ်တုံး နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနှင့် တရုတ် ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီတို့ တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်တုံပြည်နယ် ဖူဆန်မြို့ ပြည်သူ့တရားရုံးတွင် တရားရင် ဆိုင်နေပြီး မြန်မာကုမ္ပဏီ၏ လျှောက်ထားမှုကြောင့် ကျောက်စိမ်းတုံးများကို ချိပ်ပိတ် ထားကြောင်း သီတာ မြနန်းကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်အရ သိရပါသည်။
At 9/02/2012 12:55:00 PM No comments:
ဦးကျော်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ သုဿန်များအား လေ့လာမည်
NED အတွက် ဦးကျော်သူ၏ ပြည်ပခရီး National Endowment for Democracy (NED) ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ဒီမိုကရေစီ အရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် လှုပ်ရှားဆောင် ရွက်နေသည့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
At 9/02/2012 12:52:00 PM No comments:
ထူးဆန်းစွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် ဧည့်ခန်းအောက်ရှိ အလယ်ခေတ်က ရေတွင်းကြီး
ဗြိတိန်နိုင်ငံ ပလစ်မောက်သ်မြို့မှ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးသည် ၄င်းတို့၏ နေအိမ် ဧည့်ခန်းအောက်တွင် ၃၃ ပေ အနက် ရှိသော အလယ်ခေတ်က တူးဖော်ခဲ့ဟန်ရှိသည့် ရေတွင်းကြီး တစ်တွင်းအား အမှတ်မထင် ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ဇနီး မောင်နှံနှစ်ဦးမှာ ကောလင်နှင့် ဗာနက်ဆာစကီးရာ တို့ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ရှေးခေတ် ရေတွင်းကြီးကို နေအိမ်၏အောက်တွင် တွေ့ရှိ ခဲ့ရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အလွန်အံ့သြ တုန်လှုပ်ခဲ့ရသည်။
At 9/02/2012 10:47:00 AM No comments:
At 9/02/2012 10:46:00 AM No comments:
ပါကစ္စတန် မင်းသမီးချော မိုနာလစ်ဇာ Murder3ဘောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်တွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်မည်
ပါကစ္စတန် မင်းသမီးချော မိုနာလစ်ဇာ သည် ''Murder3" ဘောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
At 9/02/2012 10:45:00 AM No comments:
At 9/02/2012 10:44:00 AM No comments:
At 9/02/2012 10:38:00 AM No comments:
At 9/02/2012 10:36:00 AM No comments:
Myanmar Independent News Journal ပါ ဆမားညီညီနှင့် အင်တာဗျုးဆောင်းပါး အပြည့်အစုံ
ယနေ. ၃၀-၈-၂၀၁၂ နေ.ထုတ် Myanmar Independent News Journal ပါ ဆမားညီညီနှင့်အင်တာဗျုးဆောင်းပါးအပြည့်အစုံ
At 9/02/2012 10:35:00 AM No comments:
At 9/02/2012 10:32:00 AM No comments:
At 9/02/2012 10:20:00 AM No comments:
At 9/02/2012 10:18:00 AM No comments:
At 9/02/2012 10:17:00 AM No comments:
အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများ ဆက်တိုက်ပြု လုပ်နေသည့် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး က နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးဌာနကို ခြောက်ခုအထိ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာန များကို ၃၆ ခုအထိ တိုးမြှင့်ဖွဲ့စည်းရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ထားကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များက ပြောကြားခဲ့သည်။
At 9/02/2012 10:16:00 AM No comments: